Fampianarana: namotika ny fifantohan’ny tanora amin’ny fianarana ny FB | NewsMada
Fampianarana: namotika ny fifantohan’ny tanora amin’ny fianarana ny FB
Miteraka resabe eo amin’ireo ray aman-dreny sy ny mpampianatra ny fidinan’ny taham-pahafaham-panadinana BEPC saika manerana ny Nosy. Noporofoin’ny teto amin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra izany tamin’ny salanisa 36,61%. Ny tany Sambava aza 11,5% ny taham-pahafahana.
Raha ny hevitry ny mpampianatra sendra anay, tsy mifantoka loatra amin’ny fianarana ny sain’ny ankizy, amin’izao. Tsy mahafehy tena hianatra, indrindra koa tsy manana fandavan-tena. Ankoatra izany ny tsy fisian’ny fitadidiana ireo lesona ampitaina aminy ka very anjavony ny ezaka atao. Rehefa mazo finday ny tanora iray dia hadinony avokoa ny zavatra rehetra fa toy ny nandray zava-mahadomelina izy ireo rehefa eo. Mihomehy irery, tsy maheno na antsoina aza…
Nanimba ny tanora ny gaboraraka « facebook » (FB) raha ny hevitry ny ray aman-dreny. Hatramin’ny nisian’io FB io, hita ho nidina ny fifantohan’ny ankizy amin’ny fianarana. Lany amin’ny fanaovana FB ny fotoana tokony hianaran-desona sy hanaovana fizarana ireo zava-bita tany am-pianarana. Sarotra ny mifehy ny ankizy amin’izany. Na ny raharaha ao an-trano aza, tsy hataon’ny ankizy rehefa mahazo an’io FB io fa lasa andevon’ny FB ny tanora amin’izao.
Vao tonga any am-pianarana, « selfie » no mahamaika. Manginy fotsiny ny fitobaky ny rendrarendra toy ny karaoke, ny fidorohana zava-mahadomelina, ny trano filalaovana sy filokana. Na ny zavatra mandalo amin’ny mason’ireo tanora amin’izao fotoana aza toa misarika azy hirona amin’ny zavatra hafa fa tsy amin’ny fianarana. Voakasik’izany ny dokam-barotra zava-pisotro mahamamo, ny dokam-barotra momba ny kapaoty na fimailo. Ireo horonan-tsarimihetsika mamoafady mandeha tsisy fetra…..
Vokatry ny fampianarana lava loatra indray no heverin’ireo tanora ho anton’ny tsy fahombiazana amin’ny fianarana, indrindra ny fanadinam-panjakana toy izao. »Lava loatra ny fotoana ianarana ka tsy mifantoka intsony izahay fa reraka ny saina ary hadino ireo efa natao tany aloha », hoy izy ireo.